Chinese Zodiac Tsuro Yemwana Hunhu & Maitiro | Chinese Zodiac yeVana - Zodiac Zviratidzo
Gore reRabbit reVana: Iyo Chinese Zodiac Tsuro Yemwana Tsika, Hunhu & Hunhu
Gore reRabbit revana:
Iyo Chinese Zodiac Tsuro Yemwana Tsika, Hunhu & Hunhu
Mwana akazvarwa muChinese Zodiac Gore reTsuro anokura nerunako netsitsi. Iye ane tsitsi dzechisikigo. Vamwe vanotora tsika yakapusa yaTsuro seisina simba, asi vana ava havana kushivirira kwekuzvida uye kutendeuka nemaune nekurwadziwa kwevamwe. Tsuro anogara achinongedzera anodheerera mune knoll.
Gore reTsuro rinomiririra hutano hwakanaka. Mumwana weTsuro, izvi zvinoguma nekuve tad anodzokorora kunyanya kana chimwe chinhu chingatyisidzira kuunza nyonganiso panzvimbo yekudzikama. Chengeta izvi mupfungwa kana uchironga shanduko huru. Iwe unofanirwa kuzivisa Tsuro kune iyo pfungwa yeshanduko (sekufamba) mune zvidiki zvepfungwa zvigadziriso kuti vagare murunyararo nepfungwa.
anoita ari uye libra vanoita vaviri vakanaka
Kurwisana hakuwanzo kuwanda mubhokisi rematurusi emwana. Kana nharo kana kukakavara zvatanga, Tsuro inofamba ichipinda mugomba rakachengeteka kudzamara guruva rapera. Iyo chete nguva iyo Tsuro inorwira ndeye apo chimwe chinhu kana mumwe munhu anosundira iyo 'pamusoro pemuganhu' tsvuku bhatani. Kubva pamaonero evabereki, izvi zvinoreva kuti ungatofanira kudzidzisa mwana wako mashandisiro emanzwiro avo nesimba ravo pachavo.
Tsuro yako diki ingori yekugara pamba. Ivo vanogutsikana kuverenga, pendi yemunwe uye kurota masikati muchigaro chikuru chakaputirwa kwemaawa panguva. Kunyangwe izvi zvichiratidzika kunge zvakadzoserwa, Gore reTsuro vana vanogona kuve vaneshungu uye vane matarenda anovaendesa kune vanoonekera. Izvo zvinobatsira kana Tsuro aine rusununguko mukushongedza kamuri yavo kuti vagokwanisa kuigadzira ive yemunhu yakachengeteka nzvimbo. Sezvavanokura, vanozozvichinja zvinoenderana.
Neshamwari nemhuri, chiratidzo cheChina Animal Rabbit chinoratidza hunhu hwakagadziriswa kubva pazera diki. Vane runako kudivi ravo. Tsuro anoshandisawo nzeve hombe idzodzo kuteerera kuteerera. Kuita zevezeve kutenderedza vechidiki veRabit kwakafanana nekukokwa kwekutsvaga zvakavanzika.
Kana mwana uyu achirwara kana kushungurudzika vanobva vaomesa musoro uye kunyanyisa-kunzwa. Iva munyoro pamatauriro ako. Vakanakisisa vatamba navo Rabbit ndevaya vanozvarwa muChinese Zodiac Animal Makore eImbwa, Nguruve uye Mbudzi.
MuChinese Astrology, Chiratidzo cheMwana wetsuro chinonzi chinoratidza chimiro chinotapira. Iye kana iye anozvibata pachavo nenyasha uye kuteerera. Shamwari dzinozviwana dzichigodora vechidiki vane hunhu hwakanaka vasingatomboitire nharo nekumirira mumutsara kuresitorendi. Izvo zvakanaka kuti unakirwe nerumbidzo dzinoyemurika pahunyanzvi hwako hwekuva mubereki, kunyangwe kana iri tsuro yako diki yaizoramba iine rugare uye yakanyarara nechero munhu ane chiremera.
Heano zano, amai nababa. Vana ava vanogona kugara vachiita kunge vane hasha, asi vanehungwaru zvine njodzi. Ivo vanogadzira mhedzisiro nekuziva izvo zvaunoda kunzwa nekuona. Kana vamwe vana vachirova, vachichema uye vachitsika-tsika tsoka, Tsuro anoronga uye nekunyepedzera kufamba, achirovera kune inokunda poindi. Kana Chinese Zodiac Tsuro ikarasikirwa mukuyedza kwavo iwe uchaona kusademba. Panzvimbo iyoyo, kunyarara kunodonha, zvichisiya vabereki vachifunga kuti vakambowana pfungwa yacho here.
Kana mwana Tsuro apinda chikoro hunhu hwavo hwakanaka hunopenya. Gore reMhuka reTsuro rinogadzira vadzidzi vazhinji vane hunyanzvi hwematombo. Kudzidza hakuna kunetsa kunyanya mune inodiwa fomu yeunyanzvi.
Mwana weTsuro anoita kunge ane chirevo chakanakisa 'tsoka yetsuro' muhupenyu. Ivo vanowana zvinhu zvekukosha uye vane hunyanzvi hwekuve munzvimbo chaiyo panguva yakakodzera. Mune mamwe mazwi, ivo havangamborovha Pizza zuva kuchikoro, uye kusvika kunongedzera yavo sarudzo kunze!
Chinese Chinese Tsuro Chiratidzo inopa nemutsa kuraira iyo inoratidza kunze. Paunenge uchinetseka nguva nenguva, pane munhu chaiye mukati. Tsuro vana vanogona kunetsa kupinha pasi nekuda kwehunhu hwekuchenjerera uye kuda kuve padhiraivho mumamiriro akasiyana siyana. Ah, uye nenzira USATombozama kupokana naTsuro. Iwe unogona kurasikirwa.
Vana vanozvarwa Mugore reTsuro vane hushamwari hunhu. Pakati pevezera ravo, Tsuro ane imwe pesvedzero nekuda kwekuti vamwe vanoona mweya waTsuro uri munyoro uye une rudo. Sezvo mwana anokura iwe uchaona yakanatswa kuravira mune zvese kubva kuchikafu kusvika kuchipfeko. Kufarira uku 'kwekunyaradzwa' hakusi kushaya basa kana kuzvitutumadza. Kana paine chero chinhu chinopa iyo tsuro-yakaberekwa vechidiki zvakanaka kutaura mapoinzi pakati pevana vane zvakafanana zvido.
Vabereki vemwana akazvarwa muChinese Gore reTsuro vanofanirwa kugara vachiziva kuti izvi zvine hunyanzvi. Ivo havadzidze kubva pamashoko ane hasha, asi pane kutsoropodza kunovaka. Chengetedza kuranga hurukuro dzakadzikama uye kunyange-dzakakombama. Izvi zvinoenderana nechishuwo cheTsuro yerunyararo munzvimbo dzese dzehupenyu.
Chinese Zodiac Tsuro Vana - Vasikana
Musikana Tsuro mwana akadzikama kwazvo. Iye akanaka uye ane moyo munyoro, asi zvakare ane hushoma. Izvi zvinosiya vabereki vaTsuro kune basa rekumuchengetedza kubva kuvanhu vaizoshandisa zvisina kunaka tsitsi dzake. Padivi rekuwedzera, pakati peshamwari nemhuri, musikana wechiChinese weRabbit ane nzwisiso huru pamusoro pekuti ndiani wavanosarudza kuda. Kamwe Tsuro paanofunga kuti mumwe munhu haazokwanise kuona kwavo kwakamanikana kwekuti hukama hunoshanda sei, anongomhara.
unoita virgos unowirirana nema virgos
Vasikana Tsuro vanozviwana vachikwezvwa nevanhu vezvinhu, pamwe neavo vanoratidza hunhu hweTsuro senge tsitsi uye kutarisira kwechokwadi. Isu tinoziva kubva kuChinese Zodiac hunhu, izvi zvinoitika nekuti musikana mudiki Tsuro haana nzvimbo yemhirizhonga, saka iye akasununguka anonamira kune vanhu vanonzwa vakachengeteka.
Vana vanozvarwa pasi pechiratidzo cheTsuro vane hunhu hunonyadzisa. Pakati peimwe Mhuka dzeChinese Animal Zodiac, ivo vari zvechokwadi 'munyu wepasi' mhando vana vasingazombokuvadza zvine chinangwa chero munhu kana chero chinhu. Aya ma gals ndeyechokwadi-shamwari dzebhuruu.
Tsuro vasikana vanonakirwa nekurota. Dzimwe nguva vanoputirwa mukati memakore zvekuti vanosuwa zvinhu zvakakosha pamberi pavo chaipo. Kana Tsuro-musikana ari kushandisa iyo yakasvibirira fungidziro, chenjera kuti usamukurira nekukurumidza. Haadi kubatwa pasina kumwe kubvumidzwa kwemvumo. Iyi inzvimbo yemunhu yega inoteera avo vanozvarwa pasi pechiratidzo cheTsuro muhupenyu hwavo hwese.
Panyaya yehunhu, Tsuro anowanzoita semwana ane ziso rakapamhamha. Kufunga kunogona kukunda kufunga, kukanda zvinhu pachiyero. Zvinofadza, zvisinei, kuchengetedzeka kwenzvimbo uye kumba kunogadzirisa simba rako pachako kuita nzvimbo inowirirana. Iye anogara achida uye anoda vanhu vakasimba, vanotsigira muhupenyu hwake.
Kunge vana vazhinji vanozvarwa pasi peZodiac Chiratidzo cheTsuro, musikana uyu anogona kuve nemanzwiro kunyanya panomuka mhirizhonga. Kurwa kunonetsa aura yake yese, kuchimuita kuti anetse. Muzviitiko zvakadaro, anogona kuenda kunzvimbo yakachengeteka, kunge imba yake kana nzvimbo yaanofarira yekufunga. Aya maitiro echisikigo ekudzivirira muRabbit, uye anonyanya kubatsira mune dzakawanda zviitiko.
Mwanasikana waTsuro anofunga uye anoregerera. Iye anowirirana zvakanaka nevanhu vakasiyana siyana nekuda kwekuve nepfungwa dzakapinza uye nemweya munyoro. Pane imwe nguva yakabatanidzwa muchirongwa, Musikana weChinese Tsuro anoita nemufaro asi anomira chero maitiro kana angoneta. Pakazara musikana weRabbit anotsvaga kudzikama, kunyaradzwa uye nzvimbo dzakasarudzika-dzakanaka dzinosangana nerunako.
capricorn mukadzi uye gemini murume hukama
Chinese Zodiac Tsuro Vana - Vakomana
Une runako pamaoko ako! Mutsa uye nerupo, mukomana uyu anoda rusununguko padiki. Vabereki dzimwe nguva vanonzwa kure kure nemukomana akazvarwa muChinese Gore reTsuro, asi rudo ruchiripo. Sezvaanokura anowedzera kuratidza manzwiro ake.
Mhuri inouya kutanga naVaTsuro. Iye acharamba zvine mutsindo kukoka kupati yeshamwari kana iye achiziva kuti mhuri inoda rubatsiro nechimwe chinhu. Iyi tsika inoita kuti ade vanhu nekuti vanoona kutendeka kwake. Kana dambudziko rikasimudza musoro waro wakashata, mukomana anozvarwa Tsuro anochengeta musoro wake akatwasuka nekuubata nekutsvaga mhinduro dzehupenyu, dzinowanzo shanda.
Pakati pezera ramakore manomwe, Chiratidzo cheZodiac cheRabbit chinotanga kuratidza chakavanzika, nerutivi rwehunyengeri. Izvi zvinogona kutungamira kune pranks, asi hapana chinokuvadza. Tsuro ine rugare zvakare kukuvadza nekuda kwekuseka. Ingova wakangwarira sezvo Tsuro inofanirwa kudzidza nezve mutsauko uripo pakati pezvakanaka zvakavanzika nezvakaipa.
Kusiyana nevamwe vakomana vese vanokakavara, pane rutivi rwehunyanzvi kumwanakomana wako kubva pazera diki kwazvo. Anogona kuda kunyora nhetembo kana kukubatsira mubindu. Neimwe nzira, wako Bunny anogona kutora chimbo kugadzirisa mweya wake munguva dzekupokana.
Sezvo nevasikana vanozvarwa pasi peChinese Sign yeTsuro, mukomana uyu anonzwisisa uye anobatsirwa nekutenderera nevanhu vakatendeseka vanoziva Tsuro inoda kuvimbika chaiko. Tsuro inongoda kusarudza nezve zvipfeko zvake uye zvimwe 'fashoni' zvirevo. Haana kana dambudziko rekusimbisa maonero ake pane aanofarira mafambiro anoteverwa nekupfeka izvo zvaari kuda kusimbisa jasi rake remvere.
Patafura yekudya kwemanheru, uye kwese kwese kumwe, wechidiki wechiChinese Rabbit Sign anoratidza hunhu hunomubatsira kuti akure kuva munyoro chaiye. Ndapota uye ndinokutendai dot mitsara yake kazhinji. Kukanganisa kwake kukuru kuri kunyanya kunetseka uye kusingagadzirisike. Izvo zvinoregererwa zviri nyore muchiedza chehunhu hwese hwakanaka.
Mukomana Tsuro anofara paanonzwa akachengeteka. Zvekukurumidzira zvinhu zvinogumbura yake chirevo chemaapuro chingoro nekuti iye anoda kuchengeta zvinhu pane yakatombonaka keel. Humwe hunhu hwevanhurume vakazvarwa muChinese Zodiac Gore reTsuro vari kuve nechinangwa, nekukurumidza-kupenga uye zvine mutsindo.
Tsuro vanhu vanogona kuiswa mumhando shanu dzinotevera maererano nechinyakare Chinese Chinese Elements dzidziso. Iyo Wood Rabbit ine mwero kwazvo uye isingazvikudzi. Vane maonero ehungwaru. Moto Tsuro inofunga pasi rose uye inotungamira chiito nekufunga kwakadzama. Pasi Rabbit ramangwana-kufunga uye kutarisira hupenyu hwakabudirira mune zvemari. Metal Rabbit inotapira uye inofadza, uye zviri nyore kwazvo kufambidzana nayo. Chekupedzisira, Tsuro Yemvura inochinjika zviri nyore asi inogona kutera kune zvakashata zvinokanganisa.
Mazuva: 1987, 1975, 1963
Chiratidzo: Tsuro - Tsuro kana 兎 (卯)
Dombo Dzvene: Pearl
Nhamba dzeRombo: 3, 4, 9, 12
Maruva: Snapdragon, Lily
Kadhinari mafambiro: Kumabvazuva, Maodzanyemba Kumabvazuva, Maodzanyemba
Colors: Chena, Yero, Tsvuku, Bhuruu, Pinki, Pepuru
Mazuva Akanaka: Chishanu, 1, 4, 8, uye gumi nemana mwedzi weChina
Western 'mapatya': Aries, Pisces, Libra
taurus murume nekenza mukadzi kuenderana
sagittarius mukadzi uye murume sagittarius pamubhedha
scorpio murume uye scorpio hukama hwevakadzi